China Musical igbe / musical ije ọlaedo metal igodo YM5 K-208 ụlọ ọrụ ma na-emepụta | Yunsheng
General Igodo & Mgbakwụnye maka Musical Box
18 leta osisi music igbe china emeputa
Ejiri mee Osisi Music Box omenala song ochie omenala ...
Carousel Horse Music Box Osisi Music igbe, Mechani ...
Classic olu ụtọ n'usoro music igbe na omenala music
Musical igbe / musical ije ọlaedo metal igodo YM5 K-208
Zhejiang, China (Chile)
30000000 Ibe / iberibe kwa Year
50 PC na a Polyfoam isi; Anọ bases n'ime Otu katọn
Ningbo ma ọ bụ Shanghai
1 Musical igbe / musical ije ọlaedo metal igodo YM5 K-208
2. eri: M2
3. abụọ agba n'ihi na ị na-ahọrọ: ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo
4.YUNSHENG ika, Kachasinu emeputa nke n'ibu musical ije na ụwa, mma mma & ọrụ.
5.Applicalbe ka music ije / music igbe
6.Pass Europe EN71 mma ọkọlọtọ, RoHS, 2005/84 / EC, iru enviromental nchọpụta
Mụta ihe banyere ngwaahịa nkọwa zuru ezu, ịnye ọnụahịa na ọrụ, Biko zitere mail anyị!
anabatanụ ileta anyị
The akụkọ ihe mere eme nke n'ibu music na-esite na England, ebe mgbịrịgba elu kụrụ si egwu akara hour. Swiss crafts ikom miniaturized echiche a na kere mbụ music igbe, nke oge ndị naanị n'ihi oké ozu na eze nke Europe, Asia na Middle East. A ọkara narị afọ gara aga, ọnụ Japanese ụdị mere uka-emepụta music igbe maka oge mbụ.
Na 1992, ọ bụ Yunsheng na mere nke mbụ music igbe na onwe ha ikike na China. Yunsheng musical mmegharị ikpokọta art of music na sayensị nke nkenke ígwè na-emepụta ebube musical iberibe na ike ga-enwe na a dịgasị iche iche nke musical ngwaahịa. Mgbe ọtụtụ ọgbọ nke Yunsheng ndị mmadụ unremitting mgbalị, Yunsheng enwetatụbeghị a usoro nke kwesiri ngosi rụzuru. Ugbu a, Yunsheng aghọwo a zuru ụwa ọnụ ndú na ndị kasị pụrụ iche na emeputa na ubi nke musical ije.
Ningbo Yunsheng Musical Movement Manufacturing Co., Ltd bụ otu n'ime Yunsheng Group Co., Ltd si enyemaka na nke bu ya ụzọ bụ "Ningbo Yunsheng nkenke Machinery Co., Ltd" na "Ningbo Yunsheng Musical Product Division". Na energetic nkwado si dị ike ọchịchị onyenwereoke - Yunsheng Holding Group Co., Ltd na nwanne nwanne ụlọ ọrụ --Ningbo Yunsheng Co., Ltd (Stock koodu: 600366), ụlọ ọrụ na-edu ndú na-arụ ISO9001 Quality Management System na ubi nke ndị egwú ije ngwaahịa, ọ na-ama ruru kwa afọ mmepụta nke 35.000.000 musical mmegharị, ya mmepụta na ahịa ike họọrọ mbụ na ụwa. The ngwaahịa na-ere ka ihe karịrị iri abụọ mba na mpaghara. Yunsheng ika musical mmegharị nwere anụ ụlọ ahịa, biri n'ime nke 95% na mba ahịa, biri n'ime ihe karịrị 50%. Yunsheng dị ike ọkachamara technicians na-emepụta nọgidere na-amụba anyị ngwaahịa akara na-enyere aka ahịa na-akpali akpali ọhụrụ ngwa. Yunsheng enye ọtụtụ narị musical ije dị iche iche na ọrụ na ihe karịrị puku mmadụ abụọ na ụdị dị iche iche nke olu ụtọ n'ihi na ị na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ị na-ahụ zuru okè ije maka gị ngwaahịa ngwa, anyị nwere ike na-arụ ọrụ na gị chọrọ ka-enyere gị aka ịghọta gị ọhụụ ma ọ bụrụ na a nlereanya, ụfọdụ data ma ọ bụ ọbụna ihe echiche na-nyere.
Nwee a onye na-akwanyere ùgwù site na otu, na-ewu ihe enterprise na-akwanyere ùgwù site otu
Wepụta everyday valuably
Base na integrated ụlọ ọrụ nke ọhụrụ ihe, ọhụrụ ume na electro-arụzi ụgbọala, itinye na-emepe emepe ike azọpụta oru oma green ngwaahịa
Bụrụnụ onye ndú nke ụlọ ọrụ
Yunsheng bụ, ọ ga-anọgidekwa na-ama aka iso na-enye ndị ahịa dị iche iche n'elu mma musical ije, music igbe na ngwa. Anyị ji obi ụtọ na-anabata unu nile maka a nleta ma ọ bụ oku na-aga n'ihi na ọ bụla ase.
Daalụ nke ukwuu maka ị na-elele ibe a, na-achọ gị a ọmarịcha ụbọchị!
Biko pịa bọtịnụ n'okpuru ele anyị homepage.
Previous: YF1Q Yunsheng ifufe ije aro mmepụta music igbe
Next: Classic Aka Glass Music Box yunsheng music igbe
Hazie Music Box
Music Box usoro
T-Baa AMAOKWU maka musical ije / music igbe K-01
T-Baa NCHEKWA AMAOKWU maka musical ije / music igbe ...
Yunsheng Metal diski isi maka n'ibu music igbe
Silver Metal diski isi / M3.5 K-10
Musical igbe / musical ije ọlaedo metal isi f ...
Kpochapụwo ịke AMAOKWU maka musical ije music igbe
Toy Onyinye Music Box , Osisi Metal Music Box , Osisi Toy Carousel Music Box , Spring-Drived miniature Musical Movement , Electric-Ejikwara Musical Movement, Agbamakwụkwọ Onyinye Music Box,